Maxaa sababay faafida degdeg ah ee Diinta Islaamka dalka Rwanda oo gaaray 10% tirada?… – Hagaag.com
Posted on 13 Luulyo 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Sannadguuradii 25-aad ee xasuuqii Rwanda, ayaa hadda socda, oo wadankaasi ku reebay saameyn aad u ballaaran, waxaa ka mid ah ku faafida Diinta Islaamka halkaasi.
Qiyaas ahaan rubuc qarni kahor, tirada Muslimiinta ee Rwanda waxay ahaayeen wax ka yar hal boqolkiiba tirada dadweynaha. Laakiin hadda waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10 boqolkiiba tirada dadka reer Ruwanda oo gaaraysa 11,2 milyan oo qof. Hadaba maxaa keenay isbedelka wanaagsan ee faafida Islaamka dalkaasi?.
Maxaa dhacay rubuc qarni kahor?
Ku dhowaad 800 kun oo qof ayaa lagu dilay dalka Ruwada muddo boqol malmood oo keliya ee xasuuqii Rwanda 1994, oo gestay kooxo xagjir ah oo ka soo jeeda qabiilka Hutu-ga, kuwaasi oo ugaarsanayey xubnaha beelaha laga tirada badan yahay sida Tutsiga iyo kuwa ka soo horjeeday siyaaadooda oo aan isku asalka aheyn.
Qiyaastii 85 boqolkiiba Rwandeeska waxay ka tirsan yihiin qowmiyadda Hutu, laakiin qowmiyadda Tutsi-ga ayaa majaraha u heysay nidaamka dalka muddo dheer.
Sanadkii 1959-kii, Hutu-ga ayaa waxay rideen xukunkii Boqortooyada ee Tutsi-ga, halkaasi oo ay ka firxadeen tobanaan kun ee dadka Tutsi-ga oo u cararay dalalka deriska sida Uganda.
Markaasi kadib waxaa koox ka mid ah Tutsi-ga dibad jooga ah aasaasay jabhad mucaarad ah oo loo bixiyey ( jabhada wadaniga ee Rwanda) oo ay soo galeen Rwanda 1990, dagaalka ayaa wuxuu socday ilaa 1993 dii oo heshiis nabadeed lagu soo gabagebeeyey.
Habeenkii lixaad ee bisha April 1994 ayaa waxaa la soo riday diyaarad ay la socdeen Madaxweynayaasha Rwanda Juvenal Habyarimana iyo Burundi, Cyprien Ntaryamira, waxaa shilkaasi ku dhintay dadkii diyaarada saarnaa oo dhan. Hadaba xoogaga xagjirka ee Hutu-ga waxay ku eedeeyeen soo dhicida diyaarada in ay ka dambeeyeen jabhada wadaniga ee Rwanda oo Tutsi-ga maamulayeen, waxaa markiiba bilaabmay olole abaabulan oo dad badan lagu laayey.
Dadka Muslimiinta ayaa waxay siiyeen goobo ammaan dadka Tutsi-ga waxayna ka difaaceen huwanta Hutu-ga taasi oo saameyn ku yeelatay dad badan in ay galaan Diinta Islaamka.
Abdul Salam oo Diinta Islaamka qaatay 20 sano ka hor ayaa u sheegay BBC inuu waqtigaasi jiray 15 sano markuu arkay in kaniisadaha ay ku fashilmeen in dadkii u galay in ay ammaan ku helaan ay ka waayeen ayaa ku sababtay inuu qaato Diinta Islaamka, waxayna aheyd natiijada tooska ah ee waxa dhacayey waqtigii xasuuqa.
Sida laga soo xigtay wargeyska New York Times in qiyaastii 800 kun oo Rwanda ah lagu dilay xasuuqii ma sababin oo keliya in dadka ay ka lunto kalsoonidii ay ku qabeen xukuumadooda balse xataa Diintooda, waxaa halkaasi awood ku lahaa Masiixiga Catholic ah oo hadda aad si dhakhso ah ugu faaftay Diinta Islaamka, waana meesha Diinta Islaamka degdegta ugu faaftay.
Masiixiyada Catholic ayaa dadka reer Rwanda ku dhaqmayey in ka badan boqol sano, laakin dadka ayaa ka carooday doorka qaar ka mid ah wadaadada Diinta Masiixiga ay ka qaateen xasuuqii Rwanda, dad badan ayaa diiday ka mid ahaanshaha Diinta Masiixiga ama waxayba qaateen Diinta Islaamka.
Nin kale oo lagu magacaabo Yakubu Guma Zimana oo qaatay Diinta Islaamka 1996 ayaa New York Times u sheegay in “dadka ay ku dhinteen kaniisadiisii hore, dadka mujrimiinta waxaa halkaasi ku taageerayey wadaadka kaniisada, sidaa darteed ma awoodo inaan ku noqdo halkaasi oo salaad ku tukado, kadib waxaan raadiyey Diin kale”.
Sida Alex Rotiriza uu sharaxayo sababta uu Diinta Islaamka u qaatay, ayaa yiri: “Muslimiinta ayaa si wanaagan u maareeyey xasuuqii 1994, waxaan doonay in aan ahaado sidooda oo kale, Isdilka ayaa ka dhacayey meel kasta, halka xaafadaha ay ku noolaayeen Muslimiinta ay aheyd mida ugu ammaanka fiicneyd. Waqtigaasi Muslimiinta kuma ay wada faafsaneen wadanka oo dhan sida hadda ay tahay, laakin waxay ku urursanaayeen xaafada Periago ee caasimada Kigali”.
Maxaa dhacay intii lagu jiray xasuuqii 1994-kii oo siiyey Muslimiinta ku nool Rwanda in la aamino, Muslimiinta Hutu-ga xataa wey diideen in ay iskaashi la sameeyaan maleeshiyaadka Hutu-ga oo dilayey dadka Tutsi-ga. Muslimiinta Hutu-ga ayaa markaasi sheegay in ay dareemayaan in ay si adag ugu xiran yihiin Diinta marka loo eego Isirka.
“Qofna kuma dhiman masaajidka,” ayuu yiri Ramdani Rogema, oo ah xoghayaha guud ee Midowga Muslimiinta ee Rwanda, “kuwaas oo iska caabiyay maleeshiyaadka ayna badbaadiyeen dad badan.”
Wuxuu ku daray “ka Muslimiin ahaan, waxaan ku faannaa sida ay Islaamku uga soo baxeen xasuuqii 1994”.